Amaah Bilowga Xirfadda USAA | Ogow tan ka hor intaadan deyn qaadan 2022
Bogga ugu weyn Amaahda Bilowga Xirfadda USAA: Ogow tan ka hor intaadan deyn qaadan 2022
Dadku waxay u maleeyaan sababta kaliya ee aad deyn u qaadanayso inay tahay inay awood kuu siiso inaad sii wadato waxbarashadaada. Tani maahan inta badan kiisaska maadaama ay jiraan sababo kala duwan oo aad ku qaadan karto amaahda.
Mid ka mid ah amaahda noocaas ah waa deynta bilowga shaqo ee USAA. Maqaalkani waa mid adiga lagaa rabo inaad akhrido haddii aad rabto inaad ogaato cidda u qalanta amaahdan gaarka ah iyo waxa aad u adeegsan karto.
Waa maxay Amaahda Bilowga Xirfadda USAA?
Amaahda xirfaddani waxay u furan tahay cadet-ka, badmaaxyada, iyo ka-soo-baxayaasha rasmiga ah. Muddada ay shakhsiyaadkaasi helaan way kala duwan yihiin.
In kasta oo qaarkood ay qaataan amaahdaan sannad ka hor inta aysan qalin jebin, kuwa kale ee aasaasiga ah ayaa ku helaya culeys yar iyo xitaa sannadka yar.
Si aad u hesho musharraxiinta sarkaalka amaahda waa inay ku jirtaa dhowr bilood gudahood taariikhda oggolaanshaha si loo helo.
Lacagta ugu badan ee amaahdu waxay ka timaadaa $ 25,000 - $ 35,000 iyada oo dulsaarkoodu u dhexeeyo 0.5% - 2.99%.
Waxa xiiso leh, ma jiraan wax ciqaab ah oo ku saabsan dib u bixinta hore. Sidoo kale, uma baahnid wax dammaanad ah ka hor intaadan marin deynta bilowga ah ee xirfadda.
Baadhid: Amaahda Ardayda Bangiga America: Dib -u -maalgelinta iyo Beddelka
Waxyaabaha aan u isticmaali karo Amaahda USAA
Amaahdan oo kale waa midda aan loo adeegsan in lagu bixiyo kharashaadka waxbarashada. Sidaa darteed, waxaad u adeegsan kartaa amaahda si aad u sameyso waxyaabaha soo socda.
Dhis kaydka keydka.
Bixinta dareeska ciidanka.
Isku dar deynta kaarka deynta ee dulsaarka badan.
Sideen u Dalban karaa Amaahda Xirfadda USAA?
Habka codsiga si aad u hesho amaah shaqo waa sahlan tahay. Tallaabooyinka soo socda ayaa ku hagi doona.
Kahor intaadan dalban amaahda bilawga shaqada, hubi inaad raadiso macluumaadkii ugu dambeeyay maadaama shuruudaha iyo shuruudaha ay isbedeli karaan sanad kasta.
#1 Noqo Xubin USAA
Waxaad codsan kartaa inaad xubin ka ahaato si sahlan oo aad ku heli karto martida alaabada iyo adeegyada ay USAA bixiso.
#2 Fur Koonto Hubinta
Marka xigta waa, sameynta koontada jeegga bangiga USAA si toos loogu wareejiyo mushaarkaaga militariga.
#3 Codso Amaahda USAA
Ama waad geli kartaa www.usaa.com/inet/wc/career-starter-loan ama wac tilifoonkan lambarkan 800-531-4610 si loo dejiyo habka amaahda.
la xiriira: Caymiska Baabuurka jaban ee Darawalada Cusub ee ka yar 25 sannadka 2022
Yaa Uqalmin Deyntan?
Ka sokow inaanu ahayn sarkaal milatari, tirada dadka ku jira liiska hoose waa kuwa aan ku dhicin inay ka fikiraan deynta bilowga shaqo ee USAA.
Kuwa ka baqaya in dayn lagu yeesho.
Haddii aad lacag ku bixiso waxyaabo aan loo baahnayn, waxaa laga yaabaa inaadan deynta qaadan.
Kuwa u malaynaya inaysan dhammayn koorsadooda milatari sidoo kale waa inaysan qaadan amaahda. Haddii aysan bixin, waxaa laga yaabaa inay isla markiiba bixiyaan ama ay la kulmaan dulsaar sare.
Mid ka mid ah waxyaabaha quruxda badan ee ku saabsan amaahda bilowga xirfadda ee USAA waa in lacag -bixinta la daahiyo illaa 6 bilood kadib taariikhda qalin -jabinta sida ay xor u tahay $ 775 socodka lacag caddaan ah bil kasta.
Sidoo kale, waxay soo dedejin kartaa bilowgaaga sarkaal ciidan oo cusub.
10 Siyaabood oo lagu Noqdo Wakiilka Saxiixa Amaah oo lagu kasbado $ 150/saac 2022
Waajibaadka amaahda dammaanad qaaday (CLO) waa qalab maaliyadeed oo casri ah kaas oo maalgashadayaasha ay helaan qayb yar oo ka mid ah lacagaha…
Isku-dubarid deyntu waa hab looga baxo dhammaan deyntaada. Amaahda shakhsi ahaaneed waxaa loo isticmaali karaa in lagu xoojiyo…